Home » Lahatsoratra farany farany » 10% amin'ny fiara 1 miliara ihany no tena azo antoka
Ny fikarohana vaovao avy any Canalys dia mampiseho fa ny endri-tsoratry ny rafitra mpamily mandroso (ADAS) dia natsofoka tao amin'ny 10% fotsiny tamin'ireo fiara 1 miliara ampiasaina erak'izao tontolo izao tamin'ny faran'ny taona 2020. Ny ampahatelon'ny fiara vaovao dia mivarotra ankehitriny miaraka amin'ny endri-javatra ADAS amin'ny tsena lehibe toa ny Tanibe. Sina, Eoropa, Japon ary Etazonia, saingy afaka taona maromaro vao apetraka amin'ny antsasaky ny fiara amin'ny araben'izao tontolo izao izy ireo.
Ny endri-javatra ADAS dia misy ny fanaraha-maso fitsangantsanganana an-tsambo, ny fanampiana amin'ny lalana, ny fanakanana vonjy maika ary ny fanairana amin'ny jamba. Amin'ny fampiasana sensor sy fakan-tsary, ny endri-javatra dia afaka mitazona mavitrika ny fiara amin'ny halaviran'ny fiara hafa eo alohany, mitazona ny fiara mifamezivezy eo amin'ny làlany, mitondra fijanonana tanteraka rehefa misy vonjy taitra, mamantatra fiara hafa na mpandeha an-tongotra manatona sy maro hafa.
DAS amin'ny fiara vaovao lafo
Ny endri-javatra ADAS dia miha misy hatrany amin'ny fenitra na safidy amin'ny fiara vaovao mahazatra ary na dia ny maodely fidirana aza. Ohatra, ny fikarohana avy any Canalys dia mampiseho fa ny lane-keep assist, izay rehefa mavitrika dia manome fanampiana amin'ny fitehirizana fiara amin'ny zotram-piaramanidina, dia napetraka tao amin'ny 56% ny fiara vaovao namidy tany Eropa tamin'ny tapany voalohany tamin'ny 2021, 52% any Japon, 30% any amin'ny Tanibe China ary 63% any Etazonia. Canalys dia nanisy tsipiriany momba ny endri-javatra ADAS rehetra tafiditra ao anaty fiara vaovao, amin'ny tsena lehibe isaky ny telovolana.
“Ny fampidirana ireo endri-javatra ADAS amin'ny fiara vaovao dia hisy fiatraikany tsara amin'ny fiarovana ny làlana, hampihena ny isan'ireo lozam-pifamoivoizana ary noho izany ny fahafatesany, satria ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana dia vokatry ny fanelingelenana ataon'ny mpamily na fahadisoana. Ny ADAS dia manasongadina miasa mavitrika mba hitazomana ny mpamily, ny mpandeha ary ny mpampiasa lalana hafa tsy hanana ahiahy, ”hoy i Chris Jones, Lehiben'ny mpandinika ho an'ny fiara ao Canalys. "Nefa na dia mitombo aza ny fidiran'ireto fiasa fanampiana mpamily amin'ny fiara vaovao ireto, raha jerena fa ny salan'isan'ny fiara ampiasaina dia mihoatra ny 12 taona, ary latsaky ny 75 tapitrisa ny fiara hamidy amin'ny 2021, haharitra taona maro talohan'ny antsasaky ny fiara an'arivony tapitrisa ampiasaina erak'izao tontolo izao no manana ny mampiavaka azy. "
ADAS in voasoratra anarana fiara ampiasaina
“Tamin'ny faran'ny taona 2020, tombanan'ny Canalys fa misy fiara 1.05 miliara ampiasaina erak'izao tontolo izao. Saingy ny endri-javatra lehibe ADAS dia napetraka tao amin'ny 10% fotsiny, "hoy i Jones. "Raha heverina fa ny isan'ny fiara ampiasaina dia mijanona eo amin'ny iray tapitrisa miliara amin'ity folo taona ity, ity dia fotoana maharitra tsy ampoizina ho an'ireo mpanamboatra fiara ary indrindra ireo mpamatsy teknolojia ADAS sy mpiara-miasa aminy. Fiara 900 tapitrisa eny an-dàlana izao no tsy manana endri-javatra ADAS.
"Tsy safidy ny famerenana ny endri-javatra ADAS amin'ny fiara efa antitra - ny fiara soa aman-tsara dia tsy maintsy misy fiara vaovao. Ny fahafaha-manao ADAS mandritra ny folo taona ho avy sy mihoatra dia goavana », hoy i Sandy Fitzpatrick, VP ao Canalys. "Ny toekarena mizana dia hampidina ny vidin'ny sensor ilaina amin'ny ADAS, saingy na eo aza izany, maminavina i Canalys amin'izao fotoana izao fa 30% monja amin'ireo fiara ampiasaina no hanana ny asan'ny ADAS amin'ny 2025 ary manodidina ny 50% amin'ny 2030. Mpanamboatra fiara afaka mampiditra azy ireo toy ny fenitra amin'ny fiarany vaovao, tsy misy vidiny lafo, dia hanana tombony amin'ny fifaninanana. ”
Ny fampidirana ADAS amin'ny fiara vaovao dia hanampy amin'ny fampitomboana ny fidirana. Ny teti-dratsy hikosehana hanala ireo fiara efa antitra, mandoto kokoa, ireo fiara tsy dia azo antoka amin'ny arabe dia hanampy ihany koa. Fa ny fifandraisana matanjaka kokoa, ny famokarana fangatahana ary ny fanabeazana momba ny tombotsoan'ny ADAS no zava-dehibe - mila mitady fiara miaraka amin'ny ADAS ny mpividy, tokony ho mora ampiasaina ny fiasa, tsy maintsy manatsara izy ireo fa tsy manakana ny traikefa amin'ny fiara, ary tokony hatoky sy hampiasa ny mpamily ny mpamily. Toetoetra.
Mampalahelo fa noho ny tsy fahampian'ny singa vao haingana sy ny fiantraikan'ny areti-mandringana, ny indostrian'ny fiara dia nahitana fikorontanana be tao anatin'ny 18 volana lasa. Miaraka amin'ny fotoana fiandrasana ela amin'ny fiara vaovao, ny tsenan'ny fiara efa niasa dia nanana fe-potoana vaovao. Miaraka amin'ny ADAS tsy misy statistika amin'ny fiara efa niasa, ny fitomboan'ny fidirana ADAS dia hisy fiantraikany ao anatin'ny fotoana fohy.